Saturday April 27, 2019 - 20:52:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Laba kamid ah hoggaamiyaashii hore ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa jeediyay hadallo siyaasadaysan oo ay si kulul ugu weerarayaan Xukuumadda ay majaraha u hayaan Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre.
Shariif Sheekh Axmed oo dowladda Federaalka soo hoggaamiyay muddo Afar Sanadood ah intii u dhaxaysay 2009 illaa 2012 ayaa ku eedeeyay maamulka Farmaajo in uu ku fashilmay sugidda ammaanka magaalada Muqdisho uuna loodin waayay awoodda Shabaabul Mujaahidiin.
Shariif ayaa carabaabay in Xarakada Al Shabaab ay awood ku leedahay xaafadaha ugu muhiimsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isagoo wax aan loo dulqaadan karin ku tilmaamay in shacabka waddooyinka laga xiro iyadoo amnigu yahay mid sii xumaanayo.
"Amniga Muqdisho hoos ayuu u sii dhacayaa, in magaaladna xirnaato, amni uusan jirin ma ahan wax sax ah, waa in istiraatiijiyadaas dowladda wax ka qabato, dowladda labo sano ayay wax qabanayesay, illaa iyo hadda laguma qanacsana" ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed.
Xasan Sheekh Maxamuud oo isna kalimad ka jeediyay munaasabad lagu furiyay Xisbi loogu magac daray Himilo qaran ayaa ku Eedeeyay dowladda Farmaajo in ay cadaadis dhan walba ah ku hayso Shacabka Soomaalida gaar ahaan reer Muqdisho wuxuuna ugu baaqay in ay cadaadiska ka joojiso siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo ganacsatada.
"Dalkaan Hoggaamiye xoog badan iyo shacabka oo gacan bir lagu qabto, waa tan maanta 30-sano na dhigtay waa in aan dadka jidadka laga xirin oo aan lacaburun dadka dowladda mucaaradsan" ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Labadan Hoggaamiye ee dabadhilifyada ah ayaa markii ay majaraha u hayeen dowladda Federaalka waxay aad udhibsan jireen dadka mucaaradsan siyaasadooda waxayna umuuqdaan kuwa doonaya in ay xilalka ka riixaan Farmaajo iyo Kheyre oo Fashil iyo fadeexad dhax fadhiya.
Waxaa xusid mudan in dowladda Federaalka ee hadda jirta ay tahay middkii ugu fashilka badneed ee soo marta magaalada Muqdisho balse dhammaan hoggaamiyaashii soo maray DF-ka ayaa kawada siman dabadhilifnimada dowladaha shisheeye waxayna dalka ku qabsadeen ciidamo gummeysi ah oo ay kamid yihiin kuwa Kenya iyo Itoobiya.
Farmaajo oo ugarab raariciyay Shariif iyo Xasan Sheekh.